Somali - 01. Conversation - Booklet 4: Magacyada iyo Magacyada Masiixa ee Quraanka iyo Kitaabka Qudduuska ah | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 4 Titles of Christ
4 - MAGACYADA IYO MAGACYADA MASIIXA EE QURAANKA IYO KITAABKA QUDDUUSKA AH
Quraanka waxaa ku jira ku dhawaad ​​100 aayadood oo kahadlaya Masiixa. Buug yarahan wuxuu ka hadlayaa su'aalaha soo socda: Magacyo iyo cinwaanno kala duwan ayaa Masiixa loogu sheegay Quraanka? Sidee loogu adeegsan karaa markay Masiixa la wadaagayaan muslimiinta? Sidee bay ugu kala duwan yihiin magacyada iyo magacyada Masiixa ee Kitaabka Quduuska ah?
4.02 -- 'Isa ama Ciise?
4.03 -- Masiixa - Kan Quduuska ah
4.04 -- Masiixa - Rasuul ka yimid Eebe?
4.05 -- Masiixa - Wiilka Maryan
4.06 -- Masiixa - ereyga Allah ee jirka aadanaha
4.07 -- Masiixa - ruux ka yimid Eebe
4.08 -- Masiixa wuxuu ahaa mid aan sinayn - xitaa Quraanka!
4.09 -- Masiixa - waa run Ayatollah
4.10 -- Masiixi waa naxariis Eebaha Naxariista!
4.11 -- Sidee ayuu Masiixu ugu quruxsan yahay?
4.12 -- Masiixa - kuwa daacad ah iyo kuwa xaqa ah
4.13 -- Masiixa - kan barakaysan, meel kasta oo uu doono
4.14 -- Ma Isa keliya maahee?
4.15 -- Masiixa - oo addoon ah?
4.16 -- 'Isa - waa nebiga sida Quraanka
4.17 -- Ciise waa nool yahay - u dhow Allah!
4.18 -- Sheeko Quraan ah oo u dhexaysa Allah iyo Masiixa jannada
4.19 -- Masiixa - Aqoonta saacadda!
4.20 -- Maxay 'Isa la'yahay Quraanka?
4.21 -- Masiixa - Amiirka Nabadda
4.22 -- 25 Magacyada iyo Magacyadaoo ah 'Isa, ina Maryan, Quraanka
4.23 -- 35 Magacyada Ciise Masiix ee Kitaabka Quduuska ah
4.24 -- Baaris
4.01 -- Magacyada iyo Magacyada Masiixa ee Quraanka iyo Kitaabka Qudduuska ah
Kuwa akhriya Kitaabka Quduuska ah waxay heli karaan 250 magacyo, magac iyo sifooyinka Ciise ee ku jira. Haddii qof uu Quraanka wax baro wuxuu sidoo kale ka heli karaa 25 magacyo, magac iyo sifooyin 'Isa oo ah nuxurka diinta islaamka ee xagga injiilka. Mid ka mid ah habka ugu wanaagsan ee lagu wajihi karo Muslimiinta waa inuu buuxiyaa macnaha Masiixa ee Kitaabka Qudduuska ah ee ku jira munaasadaha Islaamka ee wiilka Maryan, si uu u sharaxo Muslimiinta in Wiilka Aadanuhu uu yahay Wiilka Ilaah sida Ciise qudhiisa u sharaxay. Haddii qofku u maleeyo in uu ku guuleysan karo iyada oo aan fasiraadda Quraanka, wuxuu halis ugu jiri doonaa inuu la hadlo Muslimiinta shisheeye.
'Isa, magaca Islaamka ee Ciise, wuxuu u muuqdaa 25-kii Quraanka. Si kastaba ha ahaatee, 'Isa ma aha Ciise, sababtoo ah waxa laga jaray ilaahnimadiisa kitaabkii Muslimiinta. Ma uu ku dhiman iskutallaabta sida ku cad Quraanka. Qofna ma garanayo sababta Muxammad u doortay magaca 'Isaga halkii Ciise, tan iyo luqada Carabiga Jasu'u wuxuu diyaar u ahaa bilowgii buugaagta Kiristaanka Carabiga oo ah mid u dhigma Ciise.
Wadaaddada Orododhiga waxay ku andacoodaan in ereyga 'Ciise uu ka yimid Suuriya Suuriya ee erayga Giriigga ah ee Ciise. Qaar kale waxay oranayaan in Mohammed uu badalay xarfaha ugu horeeya iyo waraaqihii ugu dambeeyay ee magaca Carabiga Jasu'u oo uu sameeyay 'Isa laga keenay. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah caadooyinka African ah tani waa hab lagu caayo qofka qofka su'aasha ah. Qaamuuska Lisan al-Arab wuxuu soo jeedinayaa sharraxaadkii ugu dambeeyay iyadoo muujinaysa in xididka ereyga 'Isis (Ais) uu ka dhigan yahay' 'shemen' 'oo ka shaqeyn karta sunta duufaanka leh saameyn deg deg ah.
Inta badan Kirishtiyaadka carabiga ah ma isticmaalaan magaca 'Isa oo ay la hadlaan Muslimiinta, halka hawlgallada shisheeye ay mar kale sheeganayaan iyadoo aan magaca' Isa Muslimku si dhib yar u fahmi karin inay ka hadlaan Jeux. Sidaa darteed waxay isku dayaan inay buuxiyaan micnaha magaca Ciise ee Kitaabka Quduuska ah magaca Magaca Quraanka.
Waa in aan xasuustaa in Axdiga Cusub magaca magaca Ciise u muuqdo 975 jeer. Isagu waa kan ugu muhiimsan dhammaan magacyada iyo magacyada Wiilka Ilaah, iyo kan ugu badan ee loo isticmaalo. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh (sidoo kale) Muslimiinta in magaca Ciise Masiix ee wiilka Maryan lagu go'aamiyay labo ilbiriqsi (wahi) marka hore Joseph, oo ahaa mid u hoggaansamaya inuu kor u qaado (Matayos 1:21 ), ka dibna hooyadiis oo ka timid Angel Gabriel (Luukos 1:31; 2:21). Boqorku xitaa sharaxay macnaha magaca magacan, oo loo doortay inuu u ekaado: "Wuxuu dadkiisa ka badbaadin doonaa dembiyadooda" (Matayos 1:21).
Kuwa Cibraaniga ah waxay ogaan karaan in xididka magaca Ciise (Yod-shin-ain) uu u muuqdo 281 jeer Axdiga Hore ee la xidhiidha magaca Ilaah "Rabbiga": 68 jeer oo magacyada ku saabsan badbaadada iyo caawimada iyo Rabbiga ammaantiisa, iyo dembiyadiisa, ilaa uu Rabbiga gooni ahaan u taago. Sidaa darteed macneheedu waxa weeye magaca Ciise ayaa laga soo xigtey daa'in, sida qoraaga caroliga kiristaanka ah wuxuu ku qoray: "Masiixa Badbaadiyaha ayaa dhasha!"
Ereyga Giriigga ah ee Badbaadiyaha (soter), si kastaba ha ahaatee, macneheedu waxa weeye in ka badan badbaadiye ka yimaad murugo adduunka ama xukunka Ilaah. Waxay ahayd magaca sharaf of August Emperor Augustus ku amaanay dammaanad-qaadaha nabadda adduunka markii uu awood u yeeshay awooddiisa iyada oo uu ku guuleystay.
Angel Gabriel ayaa u sharraxay Joseph in dhibaatada ugu weyn ee ragga ay tahay dembigooda. Waxay naga soocaysaa Ilaah. Sidaa awgeed Ciise, wanka Ilaah, wuxuu qaatay dembiga adduunka oo wuxuu nagu soo koobay Quraanka kariimka iyada oo loo marayo isaga oo ku dul maraya iskutallaabta. Jacaylkiisa wuxuu u gudbiyay inuu fuliyo sharciga Iidda Kormarista dhimashadiisa dhimashada. Dhiigga waa madax furasho ah oo uu bixiyay xorriyaddeenna dembiga, Shaydaanka iyo cadhada Ilaah (Sura al-Saffat 37:107).
Muslimiinta ma hayo fikrado ku saabsan hodista magaca Ciise iyo awoodiisa weyn. Waa in aan ku tukado xigmadda iyo hagitaanka Ruuxa Quduuska ah ee wadahadalka aynu u dirno Muslimiinta si ay u muujiyaan macnaha buuxa ee magaca Ciise, sidaa daraadeed Sa'tan waxaa waajib ku ah inuu dhigto maxaabiistiisa Islaamka oo lacag la'aan ah, oo waxay aqbalaan cafiska dambiyadooda oo dhan. Waayo, Ciise wuxuu u dhammeeyey badbaadintiisa (Yooxanaa 19:30). Aan jeclaanno inaan Ciise jeclaano, si Muslimiintu u arki karaan isaga daciifnimadeenna.
Magaca rasmiga ah ee Ciise ee Kitaabka Qudduuska ahu waa: Kaniisadda, oo macneheedu yahay Masiixa ama Masiixa. Magaca Tani waxay Ciise u muuqataa 569 jeer Axdiga Cusub iyo 11 jeer Quraanka. Ereyga carabiga al-Masih wuxuu ka soo jeedaa "tirtir" iyo "subag". Inkasta oo macnaheedu yahay jihaad la'aanta qofkasta oo Muslim ah wuxuu ogyahay in al-Masih uu yahay "midda la yiraahdo".
Waxaan isku dayi karnaa inay sharaxaad ka bixiyaan in Axdiga Hore ee Axdiga Hore, wadaaddada iyo nebiyadii la subkay saliidda quduuska ah sida calaamad muujinaysa in Rabbi axdiga uu siiyey awood iyo awood iyada oo Ruuxiisa Quduuska ah uu u qalabeeyo waajibaadkooda. Ciise qudhiisu wuxuu sharaxay sharaftiisa sharafta Naasareet: "Ruuxii Rabbiga ayaa iigu jira, maxaa yeelay, wuxuu ii subkay inaan wacdiyo injiilka masaakiinta, ayuu iigu soo diray inuu bogsiiyo kuwa qalbi jabay …" (Luukos 4:18). -19)
Qofna kuma sharxi karo magaca "Masiixa" inuu ka fiican yahay Isaga. Waxa uu shaaca ka qaaday qaabka isdhaafka ah ee midnimada Quduuska Quduuska ah sida "Sayidka, Ruuxa iyo naftiisa". Waxa uu sidoo kale sharaxay in subkidda Ruuxa Qudduusku uu ujeedo gaar ah u leeyahay: Injiilka wacdinta "hoos u dhigo", in qalbigooda quluubtooda la mideeyo.
Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu muujinayaa in Ciise Masiix uu yahay boqorka boqorrada, wadaadka sare ee weligiis iyo ereyga Ilaah oo shakhsiyan ah. Isagu waa Rabbi sida Axdiga Cusub oo na hubi 216 jeer! Wuxuu leeyahay awoodda iyo awoodda jannada iyo dhulka. Magaca "Rabbi" Masiixa wuxuu gebi ahaanba ka maqan yahay Quraanka. Muxammad wuxuu ku adkaystay in Muslimiintu aysan weligood aqbali doonin qof magaciis ah oo ah Rabbiga. Cibaadadiisa waxaa loo diidey gabi ahaanba (Suras Al 'Imran 3:64; al-Ma'ida 5:17,31, al-Tawba 9:30,31, iwm). Miyay Muslimiintu u arkaan Rabbigeenna isaga oo adeecaya rumaysadkeenna?
Saddexdan magacyada kitaabiga ah iyo magacyada: Ciise, Masiix, Rabbiga, waxay wadaagaan 65 boqolkiiba dhammaan dhacdooyinka magaciisa ku xusan Kitaabka Qudduuska ah. Isaga oo garan kara qoto dheeraanta saddexdan magac ee Wiilka Ilaah, wuxuu rumaysan yahay oo qiranayaa, waa Masiixi oo wuxuu xaq u leeyahay inuu ku celiyo maragga Ciise ee Luukos 4:18 isaga qudhiisa.
Muxammad wuxuu aaminsanaa siyaasadda 'Isa oo wuxuu ugu yeeray wakiilka ama amiirka Eebbe shan jeer (Sura Al' Imran 3:49; al-Nisa 4:157,171, Al-Maida 5:75; al-Saff 61:6). Waxa uu sidoo kale isaga xusay dhowr jeer oo uu la socdo kuwa kale ee ilaahay (Sura al-Baqara 2:87,253: al-Hadid 57:27).
Danjiraha Alle waa ka sarreeyaa Qur'aanka kariimka. Kan dambe wuxuu mas'uul ka yahay inuu u sheego waxyaalihii Eebbe ee daahirsanaa. Safiirku, intaa waxaa dheer, waa in la fuliyo sharciyadan hoosaadka leh awood! In marqaati u ah diintooda Muslimiintu waxay qirtaan in Muxammad yahay "ergo" ee Alle, oo aan ahayn nabi! Muuse wuxuu ahaa hogaamiye uumi u ah Muxammad. Wuxuu ahaa dhexdhexaadiye u dhexeeya Rabbiga iyo dadkiisa, kuwaas oo lahaa hoggaamiye iyo maamulaan iyaga oo ah sharci-dajiye iyo garsoor. Muhammad wuu fahmay naftiisa iyo 'Ciise, ina Maryan sidoo kale, isagoo leh awood isku mid ah sida Muuse.
Malaha Muxammad waxa uu maqlay Masiixiyiinta Makka iyo Madiina in Ciise Injiilkiisa uu ka hadlayay Boqortooyada Jannada, Boqortooyada Cirka ama Boqortooyadu inta badan (qiyaastii 100 jeer), laakiin marar dhif ah (kaliya saddex jeer) oo ku saabsan kaniisadkiisa ! Muxammad wuxuu ku taliyay in Masiixu uu u yimid safiirkii Ilaahay si uu u dhiso boqortooyadiisa awood iyo xoog. Ereyga carabiga ah ee Boqortooyada wuxuu ka soo baxaa xididka "lahaanshaha" (mulk) oo macnihiisu yahay: "Abuuruhu wuxuu abuurayaa wax kasta oo uu abuuray" (Sura al-An'am 6:75; al-A'raf 7:185; -Mu'minun 23:88; Ya Sin 36:83). Masiixa wuxuu u yimid inuu sheegto hantida Rabbiga ee reer binu Israa'iil (Matayos 21:33-46).
Muxammad ma ogayn in marka la iskutallaabta Masiixa, ka dibna uu soo baxo Ruuxa Quduuska ah ee ku saabsan ducadiisa, dareenka khudbada ee akupostles ayaa isbeddelay. Xagga Falimaha Rasuullada iyo rasuullada Rasuulladu waxay ku hadlaan laba jeer marwalba kaniisadda oo ku saabsan boqortooyada! Laga soo bilaabo wakhtiga mawduuca qorshaha salada waxaa loogu yeedhaa "kuwa loo yaqaan" ee reer binu Israa'iil iyo quruumaha. Si kastaba ha ahaatee, dalabkoodii ahaa inuu dib u soo celiyo mashaariicda oo dhan looma dhicin sababtoo ah dhisitaanka kaniisaddiisa, maaddaama uu Ciise naftiisa u soo diray addoomihiisa, oo uu dunida ugu yeeray, dib ugu soo laabtay adduunka si uu u keeno dhammaan kuwa maqla Codkiisa.
Muxammad, si kastaba ha ahaatee, wuxuu fahmay shaqada Masiixa ee diin ahaan iyo sidoo kale qaab military iyo siyaasadeed. Isagu ma uusan maqlin waxa Ciise yiri: "Boqortooyadaydu maaha mid ka mid ah dunidan ... Anigu waxaan ahay boqor, sidaas daraaddeed waxaan ku dhashay dunida, oo taas aawadeed ayaan dunida u imid, inaan marag u furo runta. Mid kasta oo kan runta ah wuu maqlaa. (Yooxanaa 18:36-37)
Muxammad ma ahayn runta. Ma uusan dooneynin in uu u dhiibo Boqorka Masiixa ee Ciise Masiix oo aan jeclayn in uu naftiisa u dhiibo Rabbiga. Sidaa darteed, wuxuu ku sharaxay 'Isa kaliya oo ah wakiilka siyaasadda iyo Diinta ee Alle, sida naftiisa oo kale!
Ciise, si kastaba ha ahaatee, wuu ka baqay in uu naftiisa ugu yeedho dhowr jeer sida ku sugan Injiilka Yooxanaa, laakiin wuxuu ku nuuxnuuxsaday in "Aabihiis" isaga u soo diray isaga oo aan ahayn indho la'aan Ilaah. Sidan ayuu si toos ah shaaca uga qaaday inuu yahay Wiilka Ilaah oo leh awood buuxda:
"Tani waa nolol weligeed ah, inay kuu ogaadaan adiga, Ilaaha keliya ee runta ah, iyo Ciise Masiix oo aad soo dirtay" (Yooxanaa 17:3).
"Sida Aabbuhu ii soo diray, aniguna waan kuu soo dirayaa" (Yooxanaa 20:21).
Muxammad wuxuu ku wareersan yahay xaqiiqda ah in Ciise uu ka dhashay Maryan oo bikra ah, oo aan lahayn aabe. Waxa uu aqbalay qarsoodigan oo loo yaqaan 'Isa oo ah ina Maryan 23 jeer Quraanka. Wuxuu xitaa isku dayay inuu sababeeyo Maryan isla markaana xaqiijiyay in aysan ilmo dhalin ilmo yar (Sura Al 'Imran 3:45-47; Mar. 19:16-23 iyo al.). Muxammad wuxuu ku nuuxnuuxsaday in Jibriil (Gabriel) uu ruuxii Alle u galay Mary (Sura al-Hajj 21:91, al-Tahrim 66:12). Hadalkani waxa uu ku soo dhowaaday injiilka, laakiin wuxuu xaddiday eraygiisa isaga oo u oggolaanaya Jibriil in uu yiri 'Isa ma uusan dhalan by ruuxa Alle ee Mary laakiin kaliya abuuray. Sidaa daraadeed ayuu isku dhejiyey Nicene Creed, kaniisadaha oo dhan qirsan yihiin:
Masiixa waa Ilaah ka yimid Ilaah. Iftiinka iftiinka.
Ilaaha runta ah oo Ilaaha runta ah, oo dhashay, ma
abuurin,hal naqsi oo leh Aabbaha.
Muxammad wuxuu noqday ruux ka soo horjeeda diinta Masiixa isagoo beeninaya diinta Masiixa (1 Yooxanaa 2:22-25; 4:1-5).
In Quraanka waxaan akhrinay 17 jeer in 'Isa maaha wiilka Ilaah. Muhammad ayaa diiday fikradda ah aabaha noolaha ee Masiixa by Mary ee Mary. Dhamaan kaniisadaha si toos ah u diidaan fikraddan sidoo kale iyada oo aan lumin! Qowmiyadda Kiristaanka ee Carabta ee Penin Âsula waxay ugu yeedhay Mary "hooyadii Ilaah" oo waxay tixgelisay Saddexmaryo Quduuska ah oo ka kooban "aabe, hooyo iyo wiil" (Sura al-Ma'ida 5:116). Tani waxay si xor ah u diidday Muhamix! Haddii aan xaqiijino diidmadiisa ku saabsan fahamka dhabta ah ee dhalashada Masiixa ee wadahadal la leh Muslimiinta, wax badan oo ka mid ah xiisadaha u dhaxeeya iyaga iyo nala soo saari karo.
Baybalku wuxuu ka hadlayaa runtii ruuxiga ah ee Masiixa oo qiranaya "Ilaah, ereygiisa iyo Ruuxiisa" waa mid isku mid ah oo muuqda. Mawduuca aan cibaadada lahayn ee Maryan oo ah "aboorka Ilaah" by Masiixiyiin kaniisada ah iyo kuwa xagjirka ah ayaa ka dhigaya wada-noolaanshaha Muslimiinta mararka qaar adag.
Baybalku wuxuu ku hadlaa 59 jeer oo ku saabsan Wiilka Ilaah. Ciise waxa uu sidoo kale ku sheegay "anigu waxaan ahay" eray-celin 50 jeer ah oo uu isagu yahay Rabbiga oo u muujiyay Muuse oo ah geedkii gubanaya (Baxniintii 3:14) sida "aniga baan ahay". Saacaddii ugu horreysay ee noloshiisa Ciise wuxuu ku adkeeystay ka hor xukunka Sanhadrka in uu ahaa Masiixa, Wiilka Ilaaha nool (Matayos 26:63-68, Luukos 22:70). Qirashadan waxa lagu xukumay dhimasho. Muxammad wuxuu celiyaa oo xitaa neceb yahay markhaatiga ah "Masiixa waa Wiilka Alle" ilaa xadka uu ku habaaray dhammaan Masiixiyiin markhaatiyaasha ah iyagoo weydiistay inay Allah dilaan (Sura al-Tawba 9:30)!
Wakhtigii uu dhulka ku noolaa, Ciise wuu ogaa in qof kasta oo Ilaah uugu yeedhay wiil uu Ilaah reer binu Israa'iil loogu yeedhay caytamihii. Sidaa darteed wuxuu markhaati ahaan ugu marag furay 80 jeer sida Wiilka Aadanaha ah ee Injiillada. Markaan adeegsanayno magacan waxa uu tilmaamayaa waxsii sheegista Daanyeel 7:13-14, halkaasoo "wiilka aadanaha" uu ka muuqanayo riyadii sida boqorkii weligiis iyo garsooraha rabbaaniga ah. Laakiin intooda badani Yuhuuddu way fahmeen magacaasi oo keliya miisaankana waxay u maleyn jireen in Ciise uu naftiisa u arkay qof caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu si buuxda u soo buuxiyey ereygan oo uu la leeyahay madaxnimadiisa rasmiga ah.
Kala qeybsanaanta aayadaha ku saabsan Wiilka Aadanahu wuxuu ku markhaati furayaa darajada hoosaysa, bini-aadminimadiisa, sarradiisa iyo sadaqadiisa: "Wiilka Aadanahu uma iman inuu u adeego, laakiinse inuu u adeego, oo naftiisana madaxfurasho u bixiyo qaar badan oo kale." (Matayos 20:28) Hadaladani Ciise wuxuu ku soo noqdaa dhammaan muqaalka. Kan ugu sarreeya ayaa ka sii daran, waayo, boqorku isaguu ka yimi addoon. Ruuxiise Dhagiis ahamana maydhid (Xaqa).
Qeybta kale ee uu ka hadlayaa Wiilka Aadanku wuxuu marag furaa sharaftiisa iyo awoodiisa weyn marka uu ku noqdo sida xaakinka aadanaha oo dhan: "Marka Wiilka Aadanahu ku dhaco sharaftiisa iyo malaa'igihiisa oo dhan, carshigiisuna wuxuu ku jiraa samada hoosteeda. Quruumaha oo dhammu hortiisay ku soo ururi doonaan …" (Matayos 25:31-32 iyo al.). Ciise wuxuu ahaa nin xaqiiq ah, oo jirrabaad ah, sidaan u jirno, laakiin aan dembi lahayn (Cibraaniyada 2:17-18). Sidaa awgeed isagu wuu fahmaa oo wuu dareemaa qof kasta wuxuuna si xaq ah u xukumi doonaa.
Waxay fiicnaan laheyd haddii aan diyaar u nahay in aan wax ka barano qaabkan waxtarka leh ee Ciise, oo ilaahiisa u qariyey, oo shaaca ka qaaday qarsoodiga ah ee uu jidhkiisa ku muujiyay Wiilka Aadaniga. Magacani waa mid ka mid ah furayaasha qalbiyada quruumaha. Haddii aad ka hadlayso Wiilka Ilaah bilawgii kufsiga ee muslimka ah waxaad arki doontaa sida guntiyadu u xiran doonaan isaga. Laakiin haddii aad wax ka barato Ciise waxaad noqon doontaa mid caqli leh oo aadan diidi doonin runta. Adigu waxaad ku markhaati furi doontaa xigmadda iyo xigmadda, sida waafaqsan eraygii aad maqashay.
Muxammad wuxuu aqbalay dhowr sifooyinka, magacyada iyo magacyada Masiixa ee Quraanka, si loogu guulaysto Kiristaanka Islaamka. Wuxuu ku dhexjiraa aayadihiisa erayada Axdiga Cusub si loo tixgeliyo nabi dhab ah. Waxa uu doonayay in uu Masiixiyiin ku dhufto Abyssinia iyo wafdi ka socda waqooyiga Yemen isaga oo isku dayaya inay aaminaan. Waxaannu u joognaa sababtoo ah wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo bayaankiisa kala duwan, oo uu ka soo qaatay Kitaabka Qudduuska ah, inuu iyaga ka soo qaato Qur'aanka oo uu dib ugu soo celiyo macnaha asalka ah ee ku sugan injiilka, sida midnimada miisaska miisaanka gasho qaab waxtar leh. Tani waxay ka caawin kartaa Muslimiinta, kuwaas oo raadinaya runta, si ay u helaan jidkooda badbaadada ee Masiixa.
Mucjisada Yooxanaa, Muhammad afartan jeer ayaa qiray in erayga Masiixu yahay ereyga Ilaah ama ereygiisa (Sura Al 'Imran 3:39,45,64; Al-Nisa 4:171). Muslimiintii Muslimiintu waxay mar dambe arkeen in magacyada kuwa Masiixa ay ahaayeen kuwa danta diinta Islaamka ku dhaqma, isla markiiba waxay sheegteen in Masiixa uu yahay erey "abuuray" erayga Eebbe, oo aan ku jirin joogitaanka dhabta ah ee ugu sarreeya. Sida abuuraha Masiixa, Alle ayaa loo malaynayay inuu yiri: "Noqo, dabadeedna wuxuu ahaa." Isla markaasna faallooyinka muslimiinta ah waxay tixgeliyaan in Qur'aanka (Al Imran 3:47) uu ku jiro joogitaanka dhabta ah ee Alle, doonistiisa iyo awooddiisa.
Waxaan xaq u leenahay inaan u sharraxno Muslimiinta in isku midka ah Ciise. Dhammaan awoodda hal-abuurka ah ee ereyga Ilaah, awooddiisa bogsiinta, Awoodiisa cafiska, naxariistiisa raaxada leh iyo awoodiisa cusboonaysiinaya ee isaga ku shaqeeya. Masiixa dhammaan sifooyinka iyo jacaylka ereyga Ilaah ayaa jira. Doonista Ilaah, xikmadiisa, cadhadiisa, jacaylkiisa, naxariistiisa, dulqaadkiisa, wax kasta oo uu Ilaah u sheegay oo amraya, ballanqaaday iyo mamnuuceen inuu ku dhaco Ciise. Isaga oo isaga wax walba wax ku sii sheegayaa ayaa haa ah iyo haatanse. Kii doonaya inuu ogaado doonista Ilaah waa in uu eego Ciise: Waa jacaylka wanaagsan ee Aabbaha. Wuxuu yiri:
"Ereyadaan aan kugula hadliayo kuma hadlin shaqadayda, laakiin Aabbaha igu dhex jira ayaa qabanaya shaqada."
"Aniga iyo Aabbuhu mid baa midkoodba"
Qeexitaan gaar ah oo ku jira Quraanka ku saabsan erayga Ilaah ee ku jira Masiixa ayaa muujinaya in Masiixu yahay erey run ah. Xaqiiqada iyo caddaaladdu waxay u muuqdaan inay yihiin sifooyin iyo magacyada Alle, sidaa darteed aayadda macnaheedu waa: Masiixu waa hadal ah Alhllaah oo buuxa caddaalad iyo runta (Sura Maryam 19:34). Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha qaarkood waxay khalkhal galiyaan fikradahan khatarta ah ee Islaamka, waxayna ku dadaalaan in ereyadani aysan ahayn wax aan ahayn mid aan hoos u dhicin iyada oo aan wax muhiima aheyn. Laakiin ka soo horjeeda waa run. Masiixa ayaa weli ah muujinta runta iyo sharciga, Quraanka, sidoo kale (Yooxanaa 14:6). Isagu waa ka weyn yahay nebiga - waa ereyga Ilaah jidhka! Tusaalooyinkaasi waxay noqon karaan aaladda ugu xoogan ee markhaatigaaga Muslimiinta.
Qoraal kale oo ka mid ah Quraanka ayaa ka soo horjeeda oo ka hoos shaqeeya caqiidada Islaamka ee "Masiixa aan ahayn ilaah", maxaa yeelay waxaa loogu yeeraa ruuxa Alla (Sura al-Nisa 4:171). Digniintan waxay sheegaysaa in Masiixu uusan ahayn mid caadi ah oo la mid ah Muuse iyo Muxammad, laakiin wuxuu ahaa ruuxa ka yimid Ilaah. Quraanku wuxuu ku andacoodey in Sublime ay ku neefsadeen qaar ka mid ah "ruuxiisa" xagga Mary (Sura al-Anbiya '21:91; al Tahrim 66:12). Sidaa daraadeed 'Isa ayaa loo tixgeliyaa in uu yahay ruux maskax ah oo qaabka aadanaha ah. Iyada oo jidhkiisa ruuxi ah, ka dib noloshiisa noloshiisa, wuxuu u kiciyey Allaah. Islaamku, Masiixu maaha qof caadi ah, ma aha oo kaliya nabi sida dadka kale, laakiin ruux ka yimid Alle! Qoraalkan Muhammad ayaa qiray in 'Isa uusan ka tirsanayn qaybta ragga kale ee ka dhashay boodhka. Saas ma aha, waa wiil uu by ruuxa Alle, ama "wiilka dabeecadda ah" ee Alle - sida ku qoran Quraanka, sidoo kale!
Mufasiriinta Islaamku waxay aqoonsadeen daciifnimada Quraanka kariimka, waxayna ku dhejiyeen inay ka soo hor jeedaan. Waxay qortaan: Dhab ahaan, Masiixa waa ruuxa Alle ee jidhka aadanaha, laakiin - Ruux "abuuray"! Ruux ka madax banaan oo ka yimid gudaha Al-lah, oo noqon lahaa rabbaani, ma jiri karo Islaamka. Dhammaan ruuxyada Alle waxa la abuuray jinniyo, sida malaa'igo iyo jinniyo, Gabriel iyo Michael. Masiixa ayaa la sheegay inuu yahay mid ka mid ah waxyaabahan badan ee mugdiga ah ee Ilaah.
Laakiin waxaan ognahay in Masiixu ka dhashay Ruuxa Ilaah ee weligiis ah. Rabbiguna wuxuu ku yidhi, ‘’Adigu waxaad tahay wiilkayga, Maantaan ku dhalay’’. (sabuurradii 2:7) Intaa waxaa dheer, in Angel Gabriel wuxuu Maryan ku yidhi: "Ruuxa Quduuska ahi wuu iman doonaa, oo xooggii Kan ugu sarreeya ayaa kaa qaadi doona, Sidoo kalena, Kan Quduuska ah oo ah in la dhalan doono waxaa loogu yeedhi doonaa Wiilka Ilaah" (Lukos 1:35)
Muslimiintu way ogaan karaan xaqiiqadan, sida uu sheegay Boqor Hassan II ee Morocco, ka dib markii synod ka dhacay Rabat, in aan nin iyo Ayatollah midna xaq u lahayn inay naftiisa ugu yeedhaan ruuxiga Eebbe (Ruhullah), marka laga reebo Ciise oo ah ina Maryan; waayo isagu waa kan keliya ee ku dhashay Ruuxa Eebbe!
Markaan ku dhawaaqay dhalashada Masiixa ee Quraanka, Jibriil, oo sidoo kale la fahamsan yahay inuu yahay ruuxa Alle iyo mid ka mid ah muujintiisa, wuxuu ballanqaaday Maryin in uu siin doono wiil daahir iyo daahir leh (Sura Maryam 19:19). Ereygan ayaa horay u falanqeeyay faallooyin badan. Qaar ka mid ah waxay si cad u qoraan 'Isa wuxuu ku dhashay isagoo aan dembi iyo quduus ah, sababtoo ah wuxuu ka dhashay ruuxa Alle.
Qaar ka mid ah dhaqanka Muslimiinta ee dib ugu noqda Muhammad ayaa arrintan ku sifeeyey: Dhammaan carruurta waxay ku dhashaan denbig la'aan, laakiin markaa Shaydaanku wuxuu infakshaa ilmaha cusub ee dhashay dhalashadooda. Taasi waa sababta ilmo kastaa u ooyayaa - marka laga reebo Maryan iyo 'Ciise! Waxa laga ilaaliyay shaydaankii shaydaanka sababtoo ah 'Imran xaaskiisa ayaa ilmaheedii, Maryan iyo caruurteeda ku hoos jirtay ilaalinta gaarka ah ee Alle ka soo horjeeda shaydaanka, ka hor intaanay dhashin (Sura Al' Imran 3:36).
Maadaama oo Masiixu u muuqdo inuu yahay erayga Ilaah ee Quraanka kariimka ah, isagu maaha oo keliya inuu ku wacdiyo laakiin sidoo kale wuxuu ku noolaa sida ay tahay. Ma jiro farqi u dhexeeya ereygiisa iyo noloshiisa. In Islaamku, sidoo kale, 'Isa wuxuu ku hadhay aadanaha oo keliya ee aan dembi lahayn. Noloshiisa waxay ahayd ereyga muuqda ee Alle.
Haddii Masiixa uu ahaa dembiile sida ku cad Quraanka, wuu dhiman lahaa oo lahaa inay sugaan qabrigiisa ilaa saacadda xukunka Ilaah. Laakiin Masiixa, sida ku cad Quraanka, ayaa kor loogu qaaday Eebe. Wuxuu la nool yahay isaga. Isagu waa mid ka mid ah kuwa isaga u dhow. Wuxuu la hadlaa isaga oo ka hadlaya shakhsi ahaaneed (Sura al-Ma'ida 5:116-118). Ma jiro dembi isaga ka soocaya kan Quduuska ah. Masiixu waa quduus, sida Alle waa quduus. Quraanka wuxuu si cad uga hadli doonaa dembiyadii Ibraahim, Muuse iyo Muxammad (Salaah Ghafir 40:55, Muhammad 47:19; al-Fath 48:2; al-Nasr 110:3). Laakiin ku saabsan Masiixa ma jiro wax qumman, xitaa Dhaqanka, in uu dembaabay, qaldan ama uu daciif yahay.
Injiilku wuxuu ina tusayaa in xitaa jinniyadu ay fahmeen qarsoodiga ah in Ciise yahay quduus, waayo waxay ku qayliyeen: "Waannu garanaynaa waxaad tahay - Kan Quduuska ah ee Ilaah" (Markos 1:24, Lukos 4:34). Ugu dambeyntii, sarakicidda Ciise waa calaamad muujinaysa quduusnimadiisa. Haddii uu dembi keliya ku dhex samayn lahaa ereyadiisa, camalkiisa, fikirkiisa ama riyadiisa, dhimashadiisu waxay ku dhici lahayd isaga. Laakiin Masiixu wuxuu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey kuwii dhintay. Shaydaanku ma adkayn karin sarakiciddiisa!
4.09 -- Masiixa - waa run Ayatollah:
Waxaa jira laba aayadood oo Quraanka ah oo sheegaya in Masiixa iyo hooyadiis ay "calaamad u yihiin Allaah" ee adduunka (Sura al-Anaaaba 21:91, al-Mu'minun 23:50). Aayaddan kale ayaa sheegaysa in wiilka Maryan yahay mid calaamad u ah aadanaha (Sura Maryam 19:21). Ereyga calaamad u leh (ajatun) waxa loola jeedaa mucjiso ama calaamad mucjiso ah. Qofkii akhriya ereygan wuxuu la wadaagaa ereyga Eebbe wuxuu helayaa calaamadda Ayatollah. Wixii dhalashadiisa cusub, Masiixa iyo hooyadiis waxaa lagu sawiray calaamadaha mucjiso ee Alle. Iyaga gaarka ahna maaha calaamada Masiixiyiinta iyo Yuhuudda, laakiin sidoo kale Hindis, Buddhist, Muslimiinta iyo Walaalayaal. Masiixu waa calaamad u ah aadanaha oo dhan. Isaga iyo hooyadiis waa dhacdooyinka ugu weyn ee saameynaya jannada iyo cadaabta, waayo Quraanka wuxuu ka hadlaa calaamadaha Alle ee adduunka, dhulka iyo sidoo kale aakhiro!
Masiixu waa Aayadda Islaamka, waayo isagu kama uusan qaadin magaciisa jaamacad isagoo wax baranaya, laakiin wuxuu si toos ah uga helay Alle. 'Isa waa kan keliya ee Alle idmo oo Alle maalgashaday. Muxammad ma uusan dhicin inuu magacaas magaciisa u qaado, sababtoo ah aabihiis iyo hooyadiis ayaa si fiican loo yaqaan.
Injiilka waxaan ku fahmi karnaa aayaddan iyada oo la raacayo hab aan caadi ahayn. Ciise wuxuu yidhi: "Kii i arkay wuxuu arkay Aabbaha" (Yooxanaa 14:9). Wiilka Maryan waa sawirka Ilaaha aan la arki karin, oo ah muujinta ammaanta iyo iftiinka dunida. Isagu waa calaamadda Ilaah u siiyey dhammaan dadka. Waxa uu fuliyay ujeedada asaasiga ah ee abuurista: Ilaah wuxuu abuuray nin araggiisa gaarka ah, sawirka Ilaah wuxuu abuuray isaga (Wacan 1:27). Ilaa iyo haddaba qofna kuma dhicin inuu yidhaahdo: Kii aniga i arka wuu arkaa Ilaah, Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah, waayo, isagu waa mid ka mid ah Aabbihiis oo ku dhex jira isaga (Yooxanaa 17:21-24). Waxa uu rabaa inuu inaga beddelo muuqaalkiisa. Baxnadayadu waa dembigeenna, sida Bawlos uu qoray: "Dhammaan way wada dembaabeen oo ay ka gaabsadeen ammaanta Ilaah" (Rooma 3:23). Ciise wuxuu doonayaa inuu inaga tago dembigeenna oo aanu ka dhigno cilladeenna (1 Yooxanaa 3:1-3). Marqaatiga noloshaada ayaa mararka qaarkood si toos ah ugu hadli kara Muslimiinta marka loo eego ereyadaada.
'Isa waxaa loogu yeeraa Qur'aanka naxariista Alle (Sura Maryam 19:21). Muxammad wuxuu maqlay mucjisooyinka Ciise, in uu bogsiiyey dadka indhoolayaasha ah iyo kuwa baraska ah, toosay kuwii dhintay iyo cunto ka soo dejiyey xagga jannada. Isaga, Jeux wuxuu ahaa masiibo ah naxariista Eebbe. Aayaddani waxa ay si qoto dheer uga dhex baxday koox ka mid ah macallimiinta Muslimiinta ah ee Quraanka. Qaar ka mid ah waxay yiraahdaan "Alle waa naxariis (Al-Rahman), Ruuxa Quduuska ahi waa naxariis (al-Rahim) oo Masiixa waa Naxariis (Al-Rahmat)." Wiilka Maryan wuxuu isu keenaa maalka Eebe. Ruuxuna isku mid ayaa ku dhex jira labadoodaba.
Aayaddani waxa ay ku qoran tahay af Carabiga qaabka jamac ah. Allah ayaa sheegay in wiilka Maryan yahay naxariis ka timid "annaga". Sidaa darteed qaar ka mid ah dadka doonaya runta ayaa qiraya in "Masiixu yahay raxmad darro iyo isfahmid mid ah", taas oo si aan toos ahayn u xaqiijinaysa midnimada Quduuska Quduuska ah ee Quraanka.
Laakiin Muxammad wuxuu rabay inuu joojiyo sharraxaadkan, sidaas darteed wuxuu naftiisa isugu yeedhay naxariista Alle ee Quraanka sidoo kale! Sidee naxariista Alle uga muuqatay nolosheeda Muxammad? Dhammaan Aayaddiisa Qur'aanka iyo caadooyinkiisa ayaa ka dhex abuuray Shareecada Islaamka. Sharcigiisa, wuxuu isku dayay inuu qaabeeyo oo uu go'aamiyo nolosha dadka raacsan ee dhulka iyo daa'in. Si kastaba ha noqotee, sharci kasta wuxuu keenaa mucaarad iyo cadho. Qofna sharciga ma adeeci karo si buuxda iyo weligiisba. Sharciga Islaamka ayaa ugu dambeyntii xukumi doona dhammaan Muslimiinta. Muxammad wuxuu xitaa ku qasbay inuu qirto in dhammaan Muslimiinta ay waajib ku tahay inay galaan jahannamada (Sura Maryam 19:71-72).
Ciise, si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya sharciga cusub, laakiin wuxuu na siiyay naxariista cafiska. Waxa uu sidoo kale na siiyey awooda lagu fulinayo sharciga jacaylkiisa. Waxa uu inooga dhigay inaan xaq u leenahay inuu noqdo caruur Ilaah, oo wuxuu naftiisa weligiis naga dhigaa. Naxariista Alle ee noloshii Muxammad waxa uu ahaa sharci oo kaliya ugu dambeyntii la dhimi doono Muslimiinta. Naxariista Ilaah ee ku jirta Ciise Masiix, oo ah nasiib wanaag, waa nimcada xaqnimada ee la socota awoodda Ruuxa Quduuska ah, si aan u awoodno inaanu fulino sharciga cusub ee Masiixa - nimcada keligiis!
In Sura Al 'Imran waxaan akhrinay' Isa wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa wanaagsan (3:46). In Sura al-Anam waxaan sidoo kale ku akhrinaynaa in Ibraahim, Isxaaq, Yacquub iyo Nuux kuwa iska leh kuwa xaqa ah, iyo sidoo kale David, Salomon, iyo Job, Yuusuf, Muuse iyo Haaruun. Sekaryaah, Yaxya, Yooxanaa Baabtiisaha iyo "Isa ayaa ka mid ah liis gareysan oo kuwa loogu yeedhay" kuwa wanaagsan "(6:83-85). Quraanka, wanaag ahaaneed macnaheedu maaha inuu yahay dembi la'aan, laakiin wuxuu ku nool yahay sidii diinta Islaamka ka cabsada.
Ciise ayaa su'aal ka keenay mar uu ku jawaabay kii hodanka ahaa ee hodanka ahaa: "Midna ma fiicna, midna waa Ilaah" (Markos 10:18). Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa Ciise u yeedhay "macallin wanaagsan". Laakiin Ciise wuxuu rabay in uu ka gudbo riyadiisa ah inuu ku fiicnaado dareen diimeed iyo bini-aadannimo ah, wuxuuna u sharaxay raadiyaha runta ah, in jacaylka ugu sarreeya ee Ilaah uu yahay qiyaasta kaliya ee qofka uu ku fiicnaado. Dhamaanteen waxaynu leenahay qalad, waa xumaan iyo nijaaso nafteena - marka laga reebo Ciise! Waxa uu doonayay in uu hoggaamiyo ninkii dhallinyarada ahaa si uu u aqoonsado oo uu u qirto in uu Masiixa yahay "kan wanaagsan", Ilaah oo jidhka ka mid ah, jacaylka quduuska ah ee ka soo jeeda qofka.
Laakiin Muxammad wuxuu beeniyay xaqiiqadan oo wuxuu Ciise ugu yeeray mid ka mid ah kuwa wanaagsan. Marka aan la hadlno Muslimiinta waxaa ay caawineysaa in ay ka fogaadaan qiimaha bani-aadmiga ah iyo in uu jacaylka quduuska ah ee Ilaah uu yahay qiyaasta kaliya ee saxda ah. Haddii qof ku andacoodo in uu yahay mid wanaagsan, ama diin ah, waxaan waydiisan karnaa: "Ma waxaad u fiican tahay sida Alle wanaagsan?" Isagu wuu diidi doonaa, oo markaas waxaad ku tusi kartaa imtixaankiisa sida dembigiisa lagama maarmaanka ah.
Sura Maryam 'Isa waxaa loogu yeeraa' xaq, oo ka buuxsamaya cibaadada iyo daryeelkiisa hooyadiis, ma noqon doono (waa mid khatar ah) weyn ama mid murugo leh (Sura Maryam 19:32). Tilmaamahan Masiixa ee Qur'aanka wuxuu si toos ah u muujinayaa dabeecaddiisa runta ah. Masiixu ma aha oo kaliya duco iyo xaq ah, isagu waa xaqnimada naftiisa, quduusnimada Ilaah ee shakhsi ahaaneed. Tilmaamadan Quraanku waxa uu leeyahay sifooyin badan oo ku saabsan Ciise.
Muxammad wuxuu fahamsan yahay in 'Isa maaha gaajo, oo laga cabsanayo oo dhan (jabbar), ma ahan mid awood leh (Qahhar) sida uu Ilaahay ku diidan yahay Islaamka, laakiin waa qalbi qallafsan oo qalbi furan. Isagu xooggiisa ma uu qabanin. Ma uusan ka qayb qaadan wax weerar ah ama dagaallo, sida Muhammad sameeyey 29 jeer. Wuxuu amar ku bixiyay Butros: "Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan" (Matayos 26:52). Waxa uu horey ugu dhacay inuu u dhinto cadowgiisa, halkii uu ka dilo. Masiixa waa ninka jacaylka ah, oo naxariis iyo naxariis leh. Isagu wuxuu caawiyey miskiinka iyo kuwa buka, oo horena uma uu tudhin taajir iyo subax. Waxa uu ku yiri: "Ii kaalaya, dhammaantiin adoo shaqeeya, oo culays culus, oo waan idin siin doonaa. Harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta; maxaa yeelay, qalbigayguna waa hooseeyaa, qalbigayguna waa hooseeyaa, oo naftiinna nasashaad u heli doontaan. Waayo, harqoodkaygu waa dhib yar yahay, rarkayguna waa fudud yahay" (Matayos 11:28-30).
Magaca Tani ee Masiixa ee Quraanka wuxuu ka dhigayaa ilaha ilbaxnimo ee dhammaan barakooyinka Alle (Sura Maryam 19:31). Xaqiiqadani waxay ku saleysantahay sharraxa kitaabka Bawlos ee kaniisadda Efesos: "Mahad waxaa leh Ilaaha iyo Aabbaha Rabbigeenna Ciise Masiix, oo nagu siiyey barako kasta oo ka mid ah meelaha jannada ee Masiixa" (Efesos 1:3).
Aayadda Quraanka ee ku saabsan Masiixa barakeysan wuxuu Muslimiinta iyo Hindistaan ​​u soo guurtay Muslimiinta si ay ula macaamilaan Masiixiyiin ku nool agagaarkooda iyaga oo weydiisanaya salaadda in lagu bogsiiyo Masiixa. Aayaddani waxa aan akhrinay oo kaliya maahee Masiixu wuu ducayn karaa, bogsiin karaa oo ku badbaadin karaa adduunkan, laakiin sidoo kale wuxuu samayn karaa tan adduunka ka dib marka uu kacsan yahay. Nasaarada Aasiyaanka kama aysan jawaabin codsiga Muslimiinta, laakiin waxay ku jawaabtay: "Ducadeena aad adiga wax qiimo ah lagama qaadin marka laga reebo haddii aad rumaysantahay Masiixa, toobad keena dembiyadaada oo weydii Masiixa cafiska." Muslimiinta raadsaday caawimaad si dhakhso ah ayaa uga jawaabtay: "Waxaan rumaysannahay 'Ciise, ruuxa Alle ee jidhka, kan bogsiiyay kuwa buka oo toosay kuwii dhintay. Waxa uu sidoo kale u bogsiin karaa sidoo kale, isaga oo la nool Ilaah oo u ducaynaya qof kasta oo isaga u yimaada. "Ciise Masiix, wuxuu runtii u sharraxay inuu yahay Muwaadiniin dhowr ah oo Muslimiin ah, iyaga oo bogsiiyey oo ka caawiyay dhibaatooyinkooda. Isagu wuxuu ku noolaan doonaa naxariistiisa. Wuxuu leeyahay awoodda Ilaah. Ku alla kii isaga rumaystaa waa rumaysan yahay, oo wuxuu isku halleeyaa kan xoogga badan, oo wuxuu ku qayliyaa madaxa; waxay la kulmi kartaa naxariista iyo barakada Rabbigeenna iyo Badbaadiyeheenna.
Muhammad ayaa ku sharaxay 'Isa 25 magac iyo magacyo kala duwan ee Quraanka. Magacyada badankoodu waxay sharfeen wiilka Maryan oo dhan oo cabbiray, oo ka sarreeyaa oo ka sarreeya nebiyadii kale ee Alle iyo Rasuulkiisa. Si kastaba ha ahaatee, Muxammad wuxuu markhaati u yahay marxaladan kala duwan ee Masiixa si uu ugu guuleysto Masiixiyiin isaga oo ku wareegsan diinta Islaamka, isagoo Islaamku u muuqday inuu yahay mid ku dhisan diinta Masiixiga.
Si aan u jahwareerin Muslimiintiisa, si aysan u diidin Islaamka oo ay u soo jeestaan diinta kiristaanka, waxa uu lahaa inuu keeno 'Ciise, oo uu ku sarreysiisay, hoos ugu dhacaya dhulka Islaamka! Kadib wadahadal saddex maalmood ah oo ka dhacay Madiina oo la socday hoggaamiyaha kiniisaddu iyo boqorkii Wadi Nadjran iyo wafdigoodii 60 Carabi ah oo ku hadla afka Kiristaanka, Muhammad ayaa soo koobay doodihii hore ee ku saabsan Masiixa ee ku saabsan aayadda:
"Sida xaqiiqda ah, waayo, Ciise Isagu waa sidii Aadan, oo uu abuuray boodh. Markuu ku yidhi Aad ka noqo. wuxuu ahaa. Runtii waa run ka yimid Rabbigiina, ha ka shakiyin!" (Sura Al 'Imran 3:59-60)
Aayaddani waxa badanaa ku celcelisa Muslimiinta inay xoogga saaraan in 'Isa maaha kan keliya oo aan lahayn aabe. Aadan, sidoo kale, waxaa abuuray ereyga Allah, iyo Xaawo isaga oo ka mid ah feerihiisa. Sidaa awgeed dhalashada Masiixa looma tixgeliyo mid gaar ah.
Laakiin doodahani waa shaki iyo muuqaal ah. Sida laga soo xigtay Qur'aanka 'Isa lama abuurin boodh, sida Adam, oo aan amar ka lahayn Alle, laakiin waxaa soo saarey Ruuxa Alhlah ee Maryan. Aadan iyo Xaawo waxay ku dhaceen dembi, sida ku qoran Quraanka, laakiin 'Isa ma uusan samayn. Aadan iyo Xaawo ayaa laga saaray Jannada, waxayna ku dhinteen Ilaah. Laakiin wiilka Maryan wuxuu la noolyahay Alle, xitaa sida uu qabo Quraanka. Markaan dhigno kitaabka Muslimiinta waxaan arki karnaa in aysan sax ahayn in la yidhaahdo 'Isa wuxuu u eg yahay Adam, maxaa yeelay kii dambe waxa laga sameeyay boodh, laakiin' Isa waa ruux ka yimid qaabka aadanaha.
Kitaabka Quduuska ah wuxuu marag furaa dhowr jeer in Ciise uu noqday nin la yiraahdo iyo xitaa ilmo. Waxa uu u ekaaday Aadan oo waxa la jirrabay sidaan u jirno, laakiin aan dembi lahayn. Ciise wuxuu isugu yeedhay walaalkaa. Isla markiiba wuxuu ahaa Rabbiga caalamka iyo Ilaaha runta ka yimid Ilaaha runta ah. Wuxuu ahaa wiilkii Ibraahim iyo ina Daa'uud. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, isagu waa Wiilka Ilaah oo ku noolyahay dhamaystiran midnimada Fiisigiis. Ciise, haddaba, runtii nin iyo run ahaantii Ilaah. Tani waa wax macquul ah, laakiin ruuxa. Qalbigeenna ma qarsoomi karo qarsoodigan iyada oo aan nadiifin Ruuxa Quduuska ah! Waa inaan u dulqaadanno Muslimiinta markaan si dhakhso ah u fahmi karin runta labanlaaban iyo xaqiiqada dhabta ah ee Masiixa ee iyaga u gaar ah. Si aad u tukatid muslimiin xiiso leh iyo inuu ka soo badbaadiyo ruuxiisa ka soo horjeeda Masiixiga waa mid muhiim u ah sida imtixaan lagu hogaamiyo Ruuxa Quduuska ah ee aan weydiisannay salaadda.
Quraanka, Ciise wuxuu naftiisa u barayaa sida "addoonta Alkhlah (Cabdullaahi)" mid ka mid ah labadiisa khudbadood oo ah ilmo cusub oo dhashay (Sura Maryam 19:30). Dhowr jeer ayaa Muxammad ugu yeeray 'Isa by title this (Sura al-Nisa 4:172; Maryam 19:93; al-Zukhruff 43:59). Xaaladaha oo dhan wuxuu doonayay in la tirtiro ilaahnimadiisa 'Isa oo ka yimid damiirka Muslimiinta.
Dhibaatadani waxay u keentay Ciise Masiix inuu ku dhowaado ballanqaadkii Ilaah ee ku saabsan adeeggiisii ​​uu doortay ee cutubyada Ishacyaah 40 ilaa 66. Wax kasta oo lagu muujiyo oo ku saabsan adeegaha Ilaah ayaa loo sharxi karaa 'Isa oo addoon u ah Alhlah . Sharaxaadda kan la ceebeeyey - sida ku sugan Ishacyaah 53:4-12 wuxuu inoogu qaatay naftiisa iyo ciqaabkayaga - wuxuu u muujin karaa Muslimiinta. Qoraalkaas ma aqrineyno ereyga "Wiilka Ilaah", ama erayga "iskutallaabta". Sababtaas awgeed Muslimiintu waxay aqbalaan oo ay fahmaan ballanqaadkan ku saabsan addoonnimada Ilaah. Rasuul Bawlos waxa uu ku sheegay ballanqaadkii weynaa ee Ishacyaah 53 ee uu ku sameeyay Masiixa warqadiisii kaniisadda ee Filiboy sida ku xusan: "... Ciise Masiix ... isaga laftiisa sumcaddiisa, Addoon yahow indhaha la'u oo keli ah, Oo isagoo muuqaalo ah ayuu u muuqday isagoo indhihiisu furay inuu dhinto, xataa inuu iskutallaabta ku dhinto. Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah isaga aad iyo aad buu u sarraysiiyey, oo wuxuu isaga siiyey magaca magac kasta ka sarreeya; oo jilib kastoo ah waxyaalaha samada ku jira iyo waxyaalaha dhulka jooga iyo waxyaalaha dhulka ka hooseeyaaba, iyo in carrab kastaaba qirto. (xitaa Muxammad!) in Ciise Masiix yahay Rabbi, xagga ammaanta Aabbaha." (Filiboy 2:7-11)
Muxammad wuxuu sii waday inuu Islaamiyo wiilka Maryan oo mar uu ugu yeedhay nabi (Sura Maryam 19:30). Intaas ka hor, waxa uu shan jeer ku sharraxay safiirkii Eebe iyo eraygiisa. Laakiin isagoo qirtay magaciisa inuu nebi yahay, wuxuu rabay in uu caddeeyo in 'Isa uusan ka sarreynin naftiisa. Xaalad walbaba ma uusan rabin in uu naftiisa hoos ugu dhigo Masiixa.
Quraanku waxa uu magaciisa ku sheegay nebiyo dhowr ah oo ka yimid Axdiga Hore. In caadooyinka Muslimiinta Muhammad ku hadlaan 200,000 oo Nabiyo ah ee Allah, laakiin iyaga oo aan magaca ugu yeedhin. Waxay warka wanaagsan ka soo qaadaan Alle (Sura al-Baqara 2:213; al-An'am 6:61) iyo digniinaha xukunkiisa (Sura al-Baqara 2:213 et al). Waxay la silciyeen oo la dilay (Sura al-Baqara 2:61,87,91, Al Imran 3:21, 112,113,181,183; al-Nisa 4:155, 157; al-Ma'ida 5:70). 'Isa ayaa raacay raadkooda, sida uu u aqrinayo Quraanka (Sura al-Ma'ida 5:46).
Magaca "Isa nebi ahaanba wuxuu ina siinayaa suurtagalnimada in lagu tirtiro markhaatiga Masiixa ee ka imanaya Injiilka: "Ha u malaynina inaan u imid inaan jebiyo sharciga ama nebiyada, uma iman inaan u dhinto laakiin waa inaan fuliyo. Runtii waxaan idinku leeyahay, Intaan cirka iyo dhulku idlaan, xaraf ama dhibic keliya ka idlaan mayso sharciga ilaa ay wada buuxsamaan" (Matayos 5:17-18).
Mawqifka 'Isa oo nabi ah ee Islaamka ah ayaa ka caawin kara in uu ka yimaaddo eedeeymaha Muslimiinta in Axdiga Hore lagu bedelay!
Dhab ahaantii, Muxammad ma diidi karin waayitaankii weligeed ah ee Masiixa. Waxa uu marag furay laba jeer oo uu Alle kor u qaaday oo isu geeyay (Sura Al 'Imran 3:55; Al-Nisa 4:158). 'Isa sidoo kale waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay' qof aad u ixtiraamaya (qof) ee tan iyo adduunka kale 'iyo' mid ka mid ah kuwa u soo dhowaaday (Al-lah)". Muxammad wuxuu ahaa nin wanwanaagsan. Ka dib markii uu u sharraxay Masiixiyiin in 'Isa aan iskutallaabta ku dilin, wuxuu Ilaahay u geeyaa naftiisa (Samar Al' Imran 3:55; Al-Nisa 4:158).
Maxaa dhacaya! Quraanka ayaa xaqiijiyay: Ciise waa nool yahay! Ma dhimanayo! Hadalka sharciga (fatahaada) laga soo bilaabo Sacuudi Carabiya ayaa lagu xaqiijiyay maalmo in 'Isa u kacay Eebe xagga jidhkiisa, isaga iyo ruuxiisa. Wuxuu ka mid yahay addoomaha jannada ugu sareeya. Waxa uu leeyahay "wejiga weyn" sida xushmadda la ixtiraamo. Qofna ma geli karo jannada isagoo aan marin Masiixa. Qaar ka mid ah lataliyeyaasha ruuxiga ahi waxay ku andacoodaan in ficilkani (wajihun) uu noo ogol yahay inaan sheegno in Masiixu yahay dhexdhexaadiye, wadaad sare iyo udubdhexaadiyaha kuwa raacsan, oo leh axdi adag oo la leh Allah (Sura al-Ahzab 33:7).
Masiixa, sida Quraanka, wuxuu ku taagan yahay Ilaah hortiisa, sida jannooyinka, Jibriil, keruubiim iyo seraphim. Nidaamka xayiraadda ee Alle kama tirtirin isaga sababtoo ah isagu waa ruuxa Alle oo ku noolaa dhul aan dembi lahayn. Muxammad waxa uu aqbalay fikrado badan oo ka yimid caqiidada Masiixiga. Laakiin isagu marnaba ma qiray in Masiixa uu carshi ku fadhiistay Aabbihiis (Cibraanooyinka 3:21). Isaga ayaa loo geeynayaa carshiga, oo aad u dhow, laakiin marna carshi kuma xirna Aabihiis. Tani waa mid ka mid ah Muxammad: Wuxuu u muuqday inuu aqbalay 90 ilaa 95 boqolkiiba runtii, laakiin waxa uu si ba'an u kharribay dhibicda muhiimka ah (Daanyeel 7:13-14).
Intaa ka sokow, waxaan Quraanka akhrineynaa si deg deg ah in Alle, malaa'igaha oo dhan, Michael iyo Jibriil waa inay u duceeyaan Muhammad oo dhan la wadaagay Mu'miniinta oo dhan, in naftiisa laga heli karo nabadda dhexdhexaadinta dhexe (barzakh) (Suhra Al-Ahzab 33:56). Si kastaba ha ahaatee, iyadoo Masiixa uu yahay mid run ah, sida ku sugan Injiilka, wuxuu u tukaday kuwa raacsan, ma aha isaga for isaga. Ciise wuxuu ku nool yahay - Muxammad waa dhintay! Taasi waa natiijada ugu muhiimsan ee labada nin ee ugu saameynta badan adduunka! Kii Ciise daba socda, wuxuu raacaa diinta nolosha! Qofkii raaca Muxammad, wuxuu u galaa gacmaha dhimashada.
Suurada al-Ma'ida ee aynu ka akhrisanay wadahadal u dhexeeya Allah iyo Masiixa samada ka dib 'Isa ayaa si nabadgelyo ah u dhintay oo Alle u qaaday isaga naftiisa (Sura al-Ma'ida 5:116-118). Markuu Masiixa ku soo degay samada, kii wanaajiyey wuxuu weydiiyay haddii uu baray dadka asxaabtiisa ah inuu u hoggaansamo hooyadiisa iyo naftiisa oo ay la wadaagaan Alle (saddex) midnimo. Masiixa wuxuu si xaq ah u diidey eedaymahan culus ee Quraanka kariimka ah, isaga oo xaqiisana u muujiyay inuu yahay mid aan waxba galabsan islaamiyiin badan oo islaamiyiin ah.
Si kastaba ha ahaatee, markhaatiga uu Masiixa ugu yeedhay marqaatiga iyo ilaaliyaha masiixiyadiisa agtiisa ah, sida Masiixa qudhooda markhaati iyo ilaaliye hortiis. Alle iyo Masiixa waxay ku leeyihiin magaca jahannamada, shahid. Waxaan ka fiirsan karnaa Sabuurrada 23aad ee ilaha kitaabka ah ee hadalka, taas oo David uu qirayaa: "Sayidku waa adhijirkayga!" Sidoo kale Ciise waxa uu ka marag furay Injiilka in uu naftiisa yahay adhijirka wanaagsan ee naftiisa u bixiya idaha (Yooxanaa 10:11). Diinta Islaamka, 'Isa xitaa waxa uu leeyahay sifooyinka qaar ee Alle (Sura al-Nisa 4:159)! Quraanka, sifooyinka rabbaaniga ah ee aan la aqbalin waxa loola jeedo qof kasta oo kale.
Meelaha ay naftooda u hurayaan Muslimiintu waxay ka cabsanayaan maalinta Qiyaamaha, maxaa yeelay markaa Allah ayaa u imanaya inuu xukumo camalkooda. Masiixu wuxuu ku yaal meel adag oo ah Muslimiinta. Dhowr jeer ayaa dhaqanku sheegayaan in 'Isa uu ku laaban doono geeska ka gees ah, inuu dilo dhammaan doofaarka dhulka iyo in la baabi'iyo dhammaan iskutallaabta kaniisadaha iyo xabaalaha. Markaa kadib wuxuu guursan doonaa oo dhali doonaa. Adoo ah isbedelka Islaamka, wuxuu baddali doonaa dhammaanba aadanaha, oo ay ku jiraan Nasaarada (Sura al-Nisa 4:159), Alhlah. Marka uu hawshiisa dhammeeyo, wuu dhiman doonaa, sidoo kale waxaa lagu aasi doonaa Muxammad iyo Abu Bakr ee Madiina. Taasi waxay noqon doontaa saacad go'an oo mustaqbalka ah, waayo xilligaas Alhlah ayaa iman doonta si loo xukumo dunida. Wuxuu soo nooleeyn doonaa Muhammad iyo 'Isa, iyaga oo labadoodaba ku fadhiisanaya carshooyinka oo ha ka qaybgalaan xukunka aduunka. Muxammad wuxuu xukumi doonaa Muslimiinta aan ku tukan, bixin ama dagaal ku filan, halka 'Isa ayaa xukumi doona dhammaan Yuhuudda iyo Masiixiyiinta aan aqbalin diinta Islaamka.
Munaasabaddan go'aansan, dhimashada Masiixa ka dib markii uu soo socdo labaad, waxaa lagu magacaabaa Quraanka, "aqoonta saacadda" (Sura al-Zukhruf 43:61), maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa bilowgii dhammaadka dunida.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia, oo horayba u baratay Islaamka dugsiyada dawlada, waxay qirtay: "Markii aan ku khasbanaaday in aan carruurteyda ku tirtiro mabaadii'da Islaamka ee ku saabsan dhammaadka adduunka, had iyo goorba waan ka xanaaqay maxaa yeelay daciifnimada, in la dilo ka gees ah! Waxba kama jirin wax dagaal ah oo nabi Muxammad ah dhamaadkii adduunka! Waxaan doonayay inaan arko Muhammad sida goolka iyo ma aha ina Maryan! Si kastaba ha ahaatee, waxaan u maleeyay hadii Masiixa runtii ka iman doono xagga jannada, anigu waxaan isu diyaarinayaa naftiisa inaan imaado. Waa inaan aqriyaa waxa uu i weydiinayo, waxa uu amartay iyo waxa uu reebay. Sidaa darteed waxbarashadii Islaamka ee soo noqoshada Masiixa ayaa i geeysatay Injiilka, waxaanay iga caawisay inaan ogaado Badbaadiyeha sara kiciyey ereyadiisa. "Maanta waa macallin Masiixi ah oo isku dhafan oo ka markhaati furaya Ciise runta ah iyo soo noqoshadiisa.
Da'digeena da 'yarta ah waa inaanan u ogolaanin fagaaraha magacyada iyo magacyada Masiixa ee Qur'aanka inooga indha indheynaya, laakiin waa inaan u isticmaalnaa inay noqdaan barta ugu muhiimsan ee adeeggayaga adeegga ee Muslimiinta si aan u hagno gosplel buuxa. Islaamku ma laha awood uu ku badbaadiyo muslimiin ama inuu beddelo inuu mar kale dhalo!
Waa in aan aqoonsanno in Quraanka oo dhan magacyada ku saabsan ilaahnimada Masiixa iyo awooddiisa oo dhan waa la la'yahay. Ma jiraan wax qorniinka ku saabsan iskutallaabta lagu beddelayo iskutallaabta ama awooddiisa oo ah wadaad sare. Waxba lagama sheegin wax ka soo baxa Ruuxa Quduuska ah. Masiixa Quraanka lama sheegayo ilaha nolosha weligeed ah, ama madaxa kaniisadda. Tilmaamaha labaad iyo kan saddexaad ee rumaysadkeenna sida laga helay Nicene Creed ayaa dhammaantood ka maqan Islaamka! Muxammad ma uusan fahmin xidhiidhka ruuxiga ah ee u dhexeeya Masiixa iyo kaniisaddiisa. Sidaa darteed waxaan isticmaali karnaa magacyada Masiixa ee lagu sheegay Quraanka kiciyeyaasha iyo buundooyinka si ay u sharaxaan injiilka buuxa u ah carruurta Ismaaciil.
Ujeedada isbarbar dhigga magacyada iyo magacyada Masiixa ee Kitaabka Qudduuska ah iyo Quraanka maaha oo kaliya in la xoojiyo fursadaha adeegayaasha ee la hadlaya Muslimiinta, laakiin sidoo kale inay muujiyaan dabeecadda gaarka ah ee qofka Masiixa ah ee diimaha labadaba . Waxa uu yahay shakhsigii ugu weynaa ee abid ku noolaa dhulka - xitaa sida uu qabo Quraanka. Muhammad ma dafirin xaqiiqda ah in wiilka Maryan ahaa nin nabad ah. Nabiga Carbeed ayaa naftiisa u muujiyay inuu yahay dagaal ooge. Waxaa jira dhiig badan oo gacmihiisa ku jira. Muxammad wuxuu ku riyaaqay saameynta uu ku yeeshay Chirst ee raacsanaa xitaa isaga oo sharaf leh. Waxa uu ka yiri Sheekha Maryam: "Nabadgelyo baa igu soo degtay maalintii aan dhashay, maalinta aan dhimanayo, iyo maalintii aan anigu diri doono" (Sura Maryam 19:33).
Laga soo bilaabo dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa iyo xitaa sara kicinta uu ku raaxaysto Alle nasasiiyay oo nasin doono wiilka Maryan. Masiixa wuxuu abuuray nabada u dhaxaysa Ilaah iyo ragga. Wuxuu jeclaa cadaawayaashiisa. Wuxuu jecel yahay inuu u dhinto si ay u dilaan. Ciise wuxuu ahaa qalbi deg deg ah. Isagu marnaba iskuma dhicin. Waxa uu ku guuleystay iimaankiisa, jacaylkiisii, dulqaadkiisa iyo rajadiisa. Sidaa daraadeed Muslimiintu waxay ku hadlaan ereyada, "Nabadu way ku jirtaa" (as-salamu alayhi) markasta oo ay sheegaan magaciisa. Waxay dareemayaan in Masiixu yahay amiirka saxda ah ee nabadda. Si kastaba ha ahaatee, Muslimiintu waxay u isticmaalaan ereygan sharaf leh sidoo kale nebiyada kale. Laakiin nebiyada kale waxay heleen nabadgelyadooda. Masiixa oo keliya ayaa ah isha nabadda. Injiilka wuxuu ku yiri: "Nabadgaygu waan ku siinayaa. Kuma siinayo sida adduunka oo kale. Qalbiyadiinna ha ka welwelin oo ha baqin" (Yooxanaa 14:27). Waxa uu awood u leeyahay inuu baddalkiisa u bedelo nabadgelyo-doonka firfircoon (Matayos 5:9).
Tani waa nolosha weligeed ah,
si ay kuu ogaadaan,
Ilaaha keliya ee runta ah,
iyo Ciise Masiixoo aad u soo dirtay.
Magaca ama Cinwaanka 'Isa
Wiilka Maryan 23 2:87.253; 3:45; 4:157. 171; 5:17(labo jeer).46.72. 75.78.110.112.114.116; 9:31; 19:34; 23:50; 33:7; 43:57; 57:27; 61:6.14
Masiixa 11 3:45; 4:157.171.172; 5:17 (labo jeer).72 (labo jeer). 75; 9:30.31
Rasuulka Alle 5 3:49; 4:157.171; 5:75; 6:61
Rasuuladiisa guud ahaan 3 2:87.253; 57:27; et al.
Ereyga Eebbe 4 3:39.45.64; 4:171
Ereyga runta ah 1 19:34
Addoomada Eebe 4 4:172; 19:30.93; 43:59
Ruux ka yimid Eebe 3 4:171; 21:91; 66:12
Calaamad u ah dadka 3 19:21; 21:91; 23:50
Mid ka mid ah kuwa wanaagsan 2 3:46; 6:85
Sida Adam 2 3:59; 43:59
Markhaati 2 4:159; 5:117
Wiil daahir ah, oo aan dembi lahayn 1 19:19
Naxariista Eebe 1 19:21
Nebi 1 19:30
Mid ka mid ah nebiyada 16 2:61.91.136.177.213; 3:21.80.81.112.181; 4:69.155.163; 17:55; 33:7; 39:69; et al.
Wuxuu keenaa warka wanaagsan 2 2:213; 6:61; et al.
Wuxuu xaqiijinayaa Tawreed 2 5:46; 61:5
Mid ka mid ah kuwa ka digay 1 2:213; et al.
Wuxuu u ekaa hooyadiis 1 19:32
Ma jiraan wax burburin kara 1 19:32
Waxaa barakaysan, meel alla meeshuu doonayo 1 19:31
Aad ayaan u sharfay halkan iyo halkaa 1 3:45
Dhulkana Ilaahay ugu dhow 1 3:45
Aqoonta saacadda 1 43:61
Nabadgelyo korkiisa ha ahaatee 1 19:33
(oo amar lagu siidaayo sida ay u socoto)
Wiilka Nin 80
Wiilka Ilaah 59
Anigu waxaan ahay 50
jirLambarka Ilaah 33
AadSoo Saarista A 20
Wiilkii Daa'uud 10
Addoomada Addoomada 10
Kan Quduuska ah 10
Keli Keli ah 10
Wadaadka sare 10
Madaxa Kaniisadda 10
Ilaaha Qaadirka ah 10
Dhagax weyn 9
Waa midka sarraysa 8
Kan Sareeya 8
Naxariista Ilaah 7
Badbaadinta Ugu Badan 6
35 magacood iyo magacyada Ciise Masiix ayaa laga soo doortay 250 magacyada iyo magacyadoodaba Kitaabka Qudduuska ah (sida uu qoray wargayska Jarmalka ee Martin Luther). Liiskani wuxuu ku xiran yahay isbeddel, maaddaama ay jiri doonaan isbeddel ku yimaada inta jeer ee loo eego tarjumaadaha kala duwan.
4.24 -- B A R R I S
Haddii aad buug-yarahan buug-yar-buug ku baratay si fudud, waxaad si sahlan u-rogi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaabaya 90% dhammaan su'aalaha ku jira siddeed buug oo taxanahan ah, si toos ah ayuu uga heli karaa shahaadada xarunteena
wax ku ool ah oo loo qabto wadahadal lala yeesho Muslimiinta ku saabsan Ciise Masiix
Meeqo magacyo, magacyo iyo sifooyinka Masiixa waxaa laga heli karaa Kitaabka Quduuska ah iyo tirada badan ee Quraanka ah?
Muxuu magaca Ciise u jeedaa Muslimiinta iyo inta badan magaca magacan ku qoran Quraanka? Maxay adeegayaasha ajnabigaa u isticmaalaan magacan si joogta ah inta ay dadka Carabta u isticmaalaan inay iska ilaaliyaan? Muxuu Ciise u yahay mid la mid ah Ciise? Mudo intee leeg ayaan isticmaali karnaa magaca 'Isa oo ku hadlaya Muslimiinta illaa aan ku hanuuninno Ciise runta ah?
Muxuu Muxuu Yahay Masiixa (al-Masih) ee Quraanka kariimka ah? Muxuu macnahan ujumay muslinka iyo waxa Masiixi ah? Muxuu Masiix qudhiisu u sharxay magacan Injiilka?
Muxuu yahay mawduuca loo yaqaan " Rasuul ah " ama "danjiraha" (rasul) sida loogu isticmaalay Qur'aanka Masiixa? Maxay Muxammad u diidday magaciisa "Boqor" iyo "Rabbi" Masiixa, maaddaama uu ismaandhaafka siyaasadeed ee Masiixu imanayo?
Maxay wiilka Maryan ugu diidaan Islaamku weligiis maaha Wiilka Alle? Sidee ay suurtagal u tahay Muslimiinta in ay qirtaan dhalashada Masiixiga ah ee ka timid Maryan isla markaana waqti isku mid ah jaahilnimadiisa?
Laba eray oo ku jira Nicene Creed ayaa si cad u qeexaya farqiga asaasiga ah ee u dhexeeya diinta islaamka iyo diinta kiristaanka ee fahamkooda gaarka ah ee Masiixa?
Muxuu Masiixa isugu yeeray Wiilka Aadanaha 80 jeer afartiisa Injiilkiisa intuu dhifbadanaa oo badanaaba si qarsoodi ah ayuu u qirtay inuu yahay Wiilka Ilaah?
Muxuu Muslimku u malaynayaa ama u malaynayaa marka uu akhriyo Quraanka in Masiixa uu yahay Ereyga Ilaah ama Eraygiisa? Muxuu macnaheedu yahay macnaha Kitaabka Qudduuska ah kuwan oo kale?
Muxuu Muxammad u dhajiyay Masiixa inuu Ruuxa ku socdo xagga Ilaah ka yimid isaga oo dib ugu soo laabtay isaga?
Maxay suurtagal u tahay in Ruuxa Qudduuska ahi uu ka jiro Islaamka isaga oo jooga isagoo injiilka jooga?
Sidee u isticmaali karnaa erayga Quraanka ee Zakiy (daahir) 'Isa, taasoo macnaheedu yahay inuu ahaa mid aan nadiif ahayn oo aan dembi lahayn caruurnimada? Maxaan u sharaxi karnaa Muslimiinta iyadoo la adeegsanayo ereygan?
Maxay macnaheedu u tahay marqaatiyadayada Muslimiinta in Qur'aanka 'Isa waa kan keliya ee Ayatollah u magacaabay by Eebe taariikhda adduunka?
Qalabkee noocee ah ayuu Quraanka naga furan yahay isagoo caddaynaya in Masiixu yahay mid ka mid ah naxariista Eebe?
Sidee ugu fiicnayn Masiixa Quraanka tan iyo Muxammad isaga oo ku tilmaamay mid ka mid ah kuwa wanaagsan? Sidee baan u tusin karnaa Muslim in wiilka Maryan uu yahay sida wanaagsan ee Ilaah?
Muxuu Quraanka macnahiisu yahay markaan odhanayo 'Isa wuxuu ahaa mid xaq ah hooyadiis? Ma jirtaa hab lagu tilmaamayo xaqnimada Ilaah ee adeegsata ereygan?
Sidee u hirgelin karnaa codka diiniga ah ee muujinta Qur'aanka, in Masiixu yahay qof aan qalqal lahayn, ama mid saansaan ah, oo u beddelaya weedhan soocista wanaagsan ee Injiilka?
Muxuu markhaatiga Qur'aanka ku saabsan 'Isa macnaheedu yahay, marka lagu sharraxo sida barakaysan meel kasta oo uu noqon doono, dhulka sida jannada?
Muxuu Muxammad u soo koobay markhaatifurintiisa ku saabsan Masiixa mid ka mid ah odhaahda ah in Masiixu yahay Adam? Waa maxay khaldan ee codsigan marka la barbar dhigo hadallada kale ee Quraanka ee ku saabsan 'Isa?
Sidee u buuxin karnaa magaca Quraanka ee Masiixa "Addoon Alhlah" (Cabdullaahi) oo leh Injiilka oo dhan? Xaggee buu Kitaabka Quduuska ah ku magacaabay Ciise addoonkii (ama adeegaha) ee Rabbiga?
Maxay tahay sababta Ciise Masiix ee ma aha mid keliya oo ka mid ah nebiyadii laakiin uu yahay mid gaar ah iyo shakhsiyad khaas ah? Sifee qarsoodi gaaban.
Sidee Muxammad u qiran karaa in Masiixu uu aad ugu sharafsan yahay adduunkan iyo kan xigtadiisa iyo inuu ku nool yahay meel u dhow Allah markuu u soo koray?
Maxay noqon kartaa micnaha sheekada Qur'aanka ka dhexdhigi kara Allah iyo Masiix kaddib marka uu kiciyo? (Sura al-Ma'ida 5:116-118) Muxuu Masiixa u siiyay magac isku mid ah sida Alle (shaheed = kormeeraha, markhaati)?
Sidee Muslimiintu u malaynayaan in bilowgii maalinta xukunka ay si toos ah ugu xirnaan doonto imaatinka labaad ee Masiixa?
Maxay yihiin Aayadaha Quraanka ee aad ku sheegi kartaan inay sharaxaad ka bixinayaan in Jaceylku yahay amiirka keliya ee nabadda, nabadda dhabta ah iyo muslinka keliya ee runta ah ee adduunka?
Mawduucyadee muhiim ah oo Masiixa ah ayaa gabi ahaanba ka maqan Quraanka? Waa maxay sababta sidaas?
Ilaa heerkee ayaa la oggol yahay oo nagu filan inaan buuxinno magacyada Quraanka, koobabka iyo sifooyinka Masiixa iyadoo la adeegsanayo macnaha guud ee injiilka ee ereyadan?
Muxuu Muslimiinta u leeyahay dhibaatooyin aad u weyn in la fahmo ereyadeena Masiixiga sida marka aan ka hadleyno saldhigga ama badbaadiye? Maxay markhaatiyo badan oo ka mid ah Chris-thani u fahmi waayeen iyaga?
Muxuu Ciise iyo Rasuulladiisa xajiyaa markhaatifurintooda noloshooda iyo fikradaha Yuhuudda iyo dadyowga kale si ay ugu gudbiyaan runta dhabta ah ee Injiilka? Sidee Bawlos u noqotay Yuhuudi Yuhuudda ah iyo mid Gandhi ah? Maxay ahayd natiijada kama dambaysta ah ee habka kitaabkan ah ee wacdinta ah?
Qof kasta oo ka mid ah kalfadhigan ayaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo qormooyinkiisa ah iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo loo yaqaan isaga oo ka jawaabaya su'aalahan. Waxaan sugeynaa qoraalladaada qoraalka ah oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaan kuu baryaynaa Ciise, Rabbiga noloshiisa, in uu iftiimin doono, diri doono, hage, xoojiyo, ilaaliyo, iyo inuu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Page last modified on March 24, 2020, at 12:54 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)